2016 Global Zvirongwa zveMitambo uye Kufembera | Martech Zone
Takanyora nezve chii programmatic kushambadzira kunonoka gore rapfuura uye akaita hurukuro huru nenyanzvi Pete Kluge kubva kuAdobe pane iri musoro wenyaya. Iyo indasitiri iri kufamba mheni nekukurumidza. Ini handina chokwadi chetsika kushambadzira masisitimu ekutenga ayo anoda echinyorwa kupindira kwekugadzirisa ichagara. Muchokwadi, kushandisa kwechirongwa kushambadzira kunotarisirwa kutora 63% yemusika wekuratidzira wedhijitari pakupera kwegore rino maererano neMarketer.
Kubatanidzwa kweat tech uye mar tech kuchawedzera muna2016, nevashambadzi veAPAC vachiona mabhenefiti eanoshanda zvakanyanya kunanga kusvika kuvanhu chaivo, nezvakakodzera kushambadza, panguva yakakodzera.
Ini ndinogona kuwedzera kuti aya masisitimu anotarisawo chaiko nzvimbo nezvose zvakakosha uye nenzvimbo yekunangisa.
Sezvo iko kusvika kuri kuwedzera uye maalgorithms achienderera nekuve akajeka, kushambadzira kwepurogiramu kunogamuchirwa kufambira mberi. Iko kugona kwevatengesi kuwedzera hunyanzvi hwekushambadzira kwavo kuedza panzvimbo pe a pfapfaidza uye namata kusvika kune vakawanda kushambadzira kutenga kuchabatsira indasitiri.
Dhawunirodha iyo Infographic
Vashandi havazove nemikana yekuvhara kushambadzira kana vachifunga kuti kushambadzira kwakakosha kwavari. Uye mabhizinesi anogona kudzikisa mutengo pamutengo wekuwana, pamwe nekuchinjisa bhajeti kune kuvimbika nekuchengetedza. Dzvanya pane infographic ye lightbox maonero kana kurodha pasi kubva MediaMath.
Tags: 2016nhamba dzekushambadzirakushambadza manhambakushambadzira maitiroapackuratidza kushambadza manhambaemealatamMediaMathkufanotaura kwechirongwamaitiro echirongwapfapfaidza uye namataMaitiro